Android: maitiro ekuchinja kana kuwedzera google play chitoro nzira dzekubhadhara
Kuru Nhau & Ongororo Android: Ungachinja sei kana kuwedzera nzira dzekubhadhara dzeGoogle Play Store
Ndokumbira utarise: ichi chidzidzo chevashandisi vasina ruzivo.
Kana iwe uine yako Android kifaa ine mukana weGoogle Play Chitoro, iwe & apos; ungangodaro watove nemukana wekutenga chimwe chinhu kubva muchitoro. Asi pamwe dzimwe nguva haudi kushandisa nzira yekubhadhara iyo iwe yawakatanga kumisikidza, kana iwe uchida kuitsiva zvachose. Neraki, kuchinja uye kugadzirisa yako Google Store nzira dzekubhadhara kuri nyore.
Kuti ugadzirise marongero ako ekubhadhara, iwe kutanga unofanirwa kuvhura iyo Play Store app pane yako Android kifaa. Kana iyo app yavhurwa, iwe unofanirwa kubata pane bhatani remenu rinoonekwa pakona yekuruboshwe yekumusoro (iwe unogona zvakare kuwana iyo menyu nekutsvaira munwe wako kubva kuruboshwe kuruboshwe rwechidzitiro chako kuenda pakati). Kubva pamenyu inodonhedza inoratidza kumusoro, iwe unofanirwa kusarudza 'Akaundi yangu.' Ipapo iwe & apos; uchakwanisa kuona nzira yekubhadhara (kana nzira) iyo iwe yauri kutoshandisa, uye iwe unogona zvakare kuona bhatani rinokutendera iwe kuwedzera nzira nyowani dzekubhadhara. Kubaya pane iri bhatani kuchakuratidza sarudzo dzauinadzo, kusanganisira kuwedzera kiredhiti kana kiredhiti kadhi, kana kugonesa mutakuri kubhadhara.
Pazasi pebhatani re 'Wedzera nzira yekubhadhara', iwe & apos; uchacherekedza bhatani rekuti 'More kubhadhara' Paunobaya izvo, iwe unozobvunzwa kuisa zvakare password yako yeGoogle kuitira kuti upinde muakaundi yako yeWallet. Mushure mekupinda mukati, iwe & apos; uchaona yako default kiredhiti kadhi (iyo iwe yaunogona kugadzirisa kana kubvisa), uye iwe unokwanisa kugona kuwedzera mamwe makadhi.
Ehezve, iwe unogona zvakare kuita izvi zvese zvinhu kubva paPC, mushure mekupinda muGoogle Play kubva kune chero browser.
Maitiro ekugadzirisa eGoogle Play Store marongero ekubhadhara
iphone 5s mutengo pametropcs
Dzimwe nhare dzinomira kushanda paT-Mobile & apos; s 4G uye 5G network nemwedzi unotevera waNdira
Ongororo inoratidza kuti 'Usakanganise Uchiri Kutyaira' inoita kuti migwagwa ive yakachengeteka
T-Mobile Samsung Galaxy S7 uye S7 muganho pakupedzisira yakagadziridzwa kune Android 8 Oreo
iPad Pro (2021) mavara: Sirivheri vs Space Grey